Soo dejisan Tux Paint 0.9.23 – Vessoft
WindowsKuwa kaleWaxbarashoTux Paint
Bogga rasmiga ah: Tux Paint
Wikipedia: Tux Paint
Tux Rinjiga – fudud ah si ay u isticmaalaan editor graphic waayo, reer binu da’da xannaanada. software ka kooban yahay go’an aasaasiga ah ee qalabka la soo bandhigay muuqaal ah hawlihiisa u gaarka ah. Tux Rinjiga kuu ogolaanayaa inaad si ay ula shaqeeyaan qaabab kala duwan, ka dhaansado burush iyo dar qoraalka ah ee noocyada kala duwan. Sidoo kale software waxay bixisaa kala duwan oo habyaalada diyaar u ah qaab iyo isnaceybka iyo sawiro kala duwan. Rinjiga Tux uu weheliyo, tallaabo kasta oo ay saamaynta dhawaaqa funny.
set badan oo saamaynta iyo xubnihii shaqada
Taageerada ugu habyaalada diyaar
Raacidda ee falalka by dhawaaqa funny
Tilmaamo ka kaaliyaha funny
Soo dejisan Tux Paint
Faallo ku saabsan Tux Paint
Tux Paint Xirfadaha la xiriira
Qalab ku haboon waxaa loogu talagalay in ay bartaan si ay u ciyaari biyaano ah. Software wuxuu isticmaalaa habka wax ku ool ah waxbarashada si loo gaaro natiijada ugu dhaqsiyada badan.